yakakwira frequency simbi yendarira - induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
high frequency soldering copper
Induction Soldering Brass Kupinza
Induction Soldering Brass Kupota Ne IGBT High Frequency Heating Equipment
Chinangwa Kupisa ndarira uye mhangura yesoftering application pane zvekurapa zvishandiso
Chinyorwa Mhangura mhete, ndarira uye mhangura zvidimbu 5.11 "(130mm) kureba, 4.3" (110mm) OD & 0.3 "(7mm) pakukora kwakanyanya uye mhete dzesimbi
Zvishandiso • DW-UHF-10 kW yekudziisa kupisa system, yakagadzirirwa neiri kure basa remusoro rine maviri 0.33μF ma capacitor ezere e0.66.
Maitiro Iyi nzira inopedzwa mumatanho maviri anoshandisa matatu anotenderera helical coil. Maitiro ekutanga kusanganisa rin'i yendarira kune yemhangura chidimbu chinotora masekondi 3. Nhanho yechipiri ndeyekunamatira hombe yendarira kugungano rekutanga. Maitiro aya anotora masekondi makumi mashanu ehuwandu hwekuita nguva yemaminetsi maviri maminetsi gumi neshanu.
• Inokurumidza nguva yekuita, nzira yezvino inotora 5 maminitsi
• Kubatana nekushandisa saridhe rings
Categories Technologies Tags ndarira kumhangura, high frequency soldering copper, induction soldering ndarira, RF soldering mhangura, soldering ndarira kumhangura
Induction Soldering Brass Tube-Pipe
Induction Soldering Brass Tube-Pipe-Tubing Ne RF Soldering Heating System
Chinangwa: Kumisikidza maviri endarira machubhu kuyera 3/4 ″ uye 1/4 ″ pamwechete kuti ishandiswe senhare mbozha antennas. Hurefu hwemachubhu anotangira pamana (4) tsoka kusvika gumi nembiri (12) tsoka, uye inofanirwa kutengeswa padivi reaxial. Iko kubatanidzwa kunofanira kuitwa uchishandisa 60/40 Tin Lead Solder uye Kestor Rosin paste flux.
Chinyorwa: Brass Tubes kuyera 3/4 ″ uye 1/4 ″ 60/40 Tin Lead Solder
Kushanda: Kubudikidza nekushandiswa kweiyo DW-UHF-40KW kuburitsa solid state induction magetsi pamwe chete neakasarudzika mashanu (5) shandura 12 - refu chiteshi coil, zvinotevera mhedzisiro zvakawanikwa:
3750 F yakasvika uye iyo solder yakayerera mushure menguva yekudziya yemasekondi makumi matatu nemashanu.
Chiyero chekugadzira che24 XNUMX paminiti chakatemwa kuva chakakwana.
A quality solder fillet yakachengetwa mushure mekupisa uye kunotonhora
Zvishandiso: DW-UHF-40kW kuburitsa yakasimba nyika induction magetsi inosanganisira imwe (1) kure kupisa chiteshi chine maviri (2) capacitors, uye yakasarudzika shanu (5) shandura chiteshi coil yakagadzirwa kubva 3/16 ″ mhangura tubing uye kuyera 1 1 / 4 ″ na12 ″.
Kakawanda: 385 kHz
Categories Technologies Tags high frequency soldering copper, induction soldering ndarira, induction soldering copper tube, RF soldering brass, RF soldering copper pipe, soldering brass, soldering copper pipe, soldering copper tube
Induction Soldering Brass Assembly neHigh Frequency Soldering Units
Chinangwa: Kupisa bhero bhero uye yekupedzisira cap gungano kusvika 4500F yekunamatira mukati memasekondi makumi maviri. Parizvino, simbi inosungirirwa inoshandiswa kuburitsa mubatanidzwa pakati pemabhero uye chivharo. Mutengi anokumbira yemhando yakasarudzika yakabatana pamwe nekupisa kushoma kwemabhero kudzivirira annealing uye kurasikirwa kwekuita. Solder preforms, muchimiro cheyakagadzika mawasher, anofanirwa kushandiswa kupedzisa iyi application.
Chinyorwa: Brass Mhepo inopimha 2 ″ muhupamhi Solder Preforms
Kushanda: Iyo DW-UHF-20kW kuburitsa solid state induction magetsi pamwe chete neakasarudzika matatu (3) shandura kaviri maronda helical coil yakashandiswa kuzadzisa zvinotevera mhedzisiro:
4500F yakazosvika uye kushambadza kwemhepo kunopera mumasekondi 6.3.
Chimwe chidimbu chinogadziriswa chinogadziriswa chakaonekwa.
Zvishandiso: DW-UHF-20kW kuburitsa solid state induction magetsi anosanganisira imwe (1) kure kupisa chiteshi chine imwe (1) 1.2 μF capacitor, uye yakasarudzika matatu (3) shandura kaviri maronda helical coil ine mukati mehupamhi hwe0.4 ″.
Kakawanda: 307 kHz
Categories Technologies Tags high frequency soldering copper, induction soldering ndarira, Induction Soldering Brass Heater, RF Induction Soldering Brass, soldering brass
Induction Soldering Brass Rings Ne High Frequency IGBT Induction Heater
Chinangwa: Kupisa 1 3/4 ″, 3 ″ uye 6 ″ dhayamita yemhangura yekutsvedza mhete uye musangano wakapetwa wecheni yemhangura kuenda ku3600 F yekunamatira mukati memasekonzi matatu (3) kusvika matanhatu (6). Parizvino kugadzirwa kunoitwa nekushandisa iyo yesimbi simbi uye tsvimbo yekudyisa rosin cored solder. Maitiro aya anosiya solder isingadiwe parutivi rweyete rinotsvedza iyo simbi inosangana painosangana. Mutengi angade kuona kuwedzerwa kwehunhu hwekubatana pasina kupa nguva.
Chinyorwa: 303 Brass Slip Rings e1 3/4 ″, 3 ″ uye 6 ″ madimita. Sheathed Mhangura Waya Assembly.
Kushanda: Kuburikidza nekuyedzwa kwerabhoritari, iyo DW-UHF-20kW inoburitsa yakasimba nyika induction magetsi pamwe neakasarudzika mana (4) shandura "nzeve muff" yemhando coil yakaburitsa zvinotevera mhedzisiro:
Nguva dzokusvika 3750 F dzakanyorwa pasi apa:
- 1 3/4 ″ mumasekonzi matatu
- 3 ″ mumasekonzi 3-4
- 6 ″ mumasekonzi mashanu
Kukwana kukwanisa kupera kunenge kuchionekwa kubudisa musangano wakachena.
Solder preforms inokurudzirwa kuti ikurumidze kubudisa.
Kurutivi kurodha kwakagadziriswa neakasarudzika mana (4) shandura "nzeve muff" dhizaini coil.
Zvishandiso: DW-UHF-20kW kuburitsa solid state induction magetsi inosanganisira imwe (1) kure kupisa chiteshi chine imwe (1) 1.0 μFcapacitor, 4-20mA yekuisa yekukurumidza ramp simulation, uye yakasarudzika ina (4) shandura "nzeve muff ”Style coil.
Kakawanda: 265 kHz
Categories Technologies Tags high frequency soldering copper, induction soldering ndarira, RF soldering brass, soldering brass, soldering brass heater, soldering brass ring
Kugadzirisa Sirifu Kuti Uve Nechena Nokuisa Indaneti
Kugadziriswa Sirifu Kuti Uve Bhuni Nokukanganiswa IGBT Soldering Heater
Chinangwa Pisai gungano diki, goridhe-rakafukidzwa nesimbi yekubatanidza kune yendarira block.
Chinyorwa Approx. 1/8 ”(3.2mm) dhayamita yegoridhe-yakafukidzwa nesimbi yekubatanidza, 1" (25.4mm) square x 1/4 "gobvu rendarira block
Kupisa 600 ° F (315.6ºC)
Zvishandiso • DW-UHF-6kW kupisa induction sisitimu ine musoro webasa uri kure.
Maitiro A maviri-anotendeuka helical coil anoshandiswa kupa yunifomu kupisa kune zvikamu gungano. Solder paste uye kuyerera kunoiswa munzvimbo yekubatana uye simba rinoshandiswa kwemasekondi makumi maviri kusanganisa zvikamu zvacho. Zvakakodzera
fixturing inofanirwa kubata zvikamu munzvimbo.
• Inokurumidza, nzvimbo inotonhorera kune dzimwe nzvimbo dzechikamu
• Nhengo dzakanaka uye dzakachena
• Kusagadzikana kushandiswa
Categories Technologies Tags high frequency soldering copper, high frequency soldering steel, induction soldering, induction soldering ndarira, induction soldering mhangura, induction soldering kupisa, induction sordering steel, RF soldering brass, RF soldering steel, soldering steel kundarira